Soo-saarista Joogtaynta Badan ee Xadhigga Carbide Tijaabinta Codsiyada Qalabka Caafimaadka
Tijaabinta Carbide waa mid gaar ah induction brazing habka loo adeegsado sheyga adag ee adag oo lagu dhejiyo maaddada salka si loo soo saaro gees goyn aad u adag.
Ujeeddada codsigan: Induction indha-indheynta carbide ee qalabka caafimaadka Waxay jeclaan lahaayeen inay adeegsadaan tikniyoolajiyadda kuleylka soo-gelinta si ay u beddelaan tooshyada oo ay u gaaraan geedi socodka xirashada nadiifinta.
DW-HF-15 qalab xoog u isticmaalid ayaa loo dejiyay 40% si loo dhamaystiro hawsha. Xakamaynta wajiga dhijitaalka ah ee la-qabsiga ah waxay siisaa hawlgal hufan baaxaddiisu aad u ballaaran.
Qalabka bir-birta ah ee biraha-birta ah 6 13/16 "(17 cm) dheer oo dhererkeedu yahay 0.775" (1.96 cm) ballaaran oo kululaynta waa in lagu xiraa laba carbide oo la gelinayo 25/32 "(1.98 cm) dheer, 1/8" (7.8 mm) ballaaran, 3/32 "(2.54 cm) qoto dheer. Waxaa jiray iskudhaf 9/16 "(1.42 cm) dheer, 1/8" (25.4 mm) ballaaran (dhinac kasta oo madaxa ka goynaya) iyo 1/16 "(1.58 mm) qoto dheer.
Qulqulka qulqulka 'Brazing flux' ayaa lagu dabaqay aagga wadajir. Qalabka carbide-ka ayaa markaa la dhexdhigay inta udhaxeysa foomamka hore. Golaha ayaa si wada jir ah loo xiray oo la keenay kululaynta kuleylka induction. Kuleylka waxaa la codsaday 8 ilbiriqsi oo gaareysa heerkulka ~ 1400 ° F (760 ° C). Qaybaha si guul leh ayaa loo wada xiray.
Warshadaha: Caafimaadka & Ilkaha
Categories Technologies Tags adkeysi, carbide burco, Xaraashka Carbide Tabaha, indha indheynta carbide tipping induction, kululeeyaha carbide tipping induction kululeeyaha, Xaraashka Carbide, HF bracing carbide, Tilmaamida carbide HF, brazing induction, carbide induction brazing induction, Induction Brazing Carbide Tabaha, Qalabka daaweynta ee indha indheynta, foorashada indha indheynta Post navigation